Howlga Amni oo Garowe laga billaabayo [Dhagayso+Sawirro]
Shirkan oo ka dhacay Garowe, ayaa diiradda lagu saaray sidii wax looga qaban lahaa dal-daloola amniga ee muddooyinkan ka jiray magaalada.
Xubnaha kulanka yeeshay ayaa isku af-gartay dhowr qodob oo ay kamid ahaayeen;
1: In la qabto dhammaan dambiilayaasha oo kala ah Argigixisada, kuwa dadka baarta iyo kuwa dhulka lu haya boobka
2:-Laga bilaabo todobada bishaan qofkii lagu qabto hub isagoo aan shaqo ku jirin sharciga ayaa la horgaynaynaa, hubkana waa lagala wareegayaa.
Garoonka Kubbadda Cagta ee Mire Awaare ayaa lagusoo bandhigay ciidamada fulintoonta howgalkan oo qaadan doona muddo bilooyin ah.
Taliyaha la dagaalanka argigixisada Puntland, General Muxiyadiin Axmed Muuse oo taliye looga dhigay howlgalkaan ayaa wacad ku maray inay gacan bir ku qabandoonaan burcadda dhibaatada ku haysa bulshada.
Muxiyadiin ayaa digniin u jeediyay cid walba oo ku howlan inay xagal daaciso ammaanka caasimadda Puntland, wuxuuna bulshada ka codsaday inay la shaqeeyaan ciidamada.
Cabdi Xirsi Cali (Qarjab) oo ah wasiirka Amniga Puntland, ayaa xusay in ciidamadu inay iska difaacaan cid kasta oo dhibaato kala hortimaada, isagoo sidoo kale ugu baaqay inay bulshada u naxariistaan mudada ay wadaan howlgalkan.
Arrintan ayaa timid xilli shalay magaalada Garowe ay ka dhacday is-rasaasayn ka dhalatay muran ku aadan dhulka, taasoo dhexmartay ciidamada amniga iyo dhalinyaro.
Garowe ayaa muddooyinkii dambe waxaa aad ugu soo badanayay khilaafaadka ku salaysan dhulka oo hadda lagu tilmaamo meelaha ugu qaalisan Puntland.
Sannadkii hore ayay ahayd markii howlga muddo bil ah socday lagula dagaallamayay bacaha madow ee baabuurta lagu xiro iyadoo sidoo kale baaritaano lagu samaynayay xaafadaha iyo hubka loo isticmaalo qaabka sharci darrada ah.
Lama oga waxa qorshahan uu ka badali doono xaaladda magaalada Garowe.
GAROWE, Puntland- Waxaa wali kasocda magaalada Garowe howlgal lagu xaqiijinayo amniga caasumadda kadib markii ay muddooyinkii dambe u muuqatay mid faraha kasii baxday, waxaana shalay la billaabay howlgal socon doono 30 casho kaasoo ay ka qayb qaadanaya ciidamada Kum ...
Puntland 07.12.2016. 18:20
​Faah faahin laga helayo xaaladda degmada Qandala
Puntland 06.12.2016. 16:46
Puntland 05.12.2016. 20:03
Puntland 05.12.2016. 09:52
​Puntland oo beenisay in Qandal gacantooda kusoo noqotay
Puntland 04.12.2016. 19:53